7 Grammar သင်လေချာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society »7Grammar သင်လေချာ
7 Grammar သင်လေချာ
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 22, 2013 in Community & Society, How To.. | 18 comments
တလောက TheWeek.com မှာ ပူပန်နေဖို့ မထိုက်တဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှား ဂရမ်မာ အများများ ဆောင်းပါး အဆက်ဖြစ်ပါ။ တန်ဖိုးရှိပြီး လေးစားလိုက်နာရမည့် သဒ္ဒါစည်းကမ်းများစွာ ရှိပါတယ်။ သူတို့နောက် မလိုက်လို့ လူဆိုး၊ စာရေးမသာ ဖြစ်သွားစရာတော့ မရှိဘူး။ တချိန်မှာ အဲဒီသဒ္ဒါစည်းကမ်းတွေကို Henry James, Henery Adams နဲ့ အခြားထင်ရှားသော ဟင်နရီအမည်တပ် စာရေးဆရာများစွာ ချိုးဖောက်ခဲ့ဖူးတာ သေချာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သဒ္ဒါစည်းကမ်းသည် ဖြစ်သလို ရေးနေကြတဲ့ ယနေ့ခေတ် စာအရေးအသားမှာ အားအနည်းဆုံး ထောက်ပြဝေဖန်ခံရတဲ့ ပြသနာတခု ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျနော့်စာအုပ်အသစ် How to Not Write Bad: The Most Common Writing Problems and the Best Ways to Avoid Them, မှာ စာလုံးဖောင်းပွမှု၊ စကားလုံး အရွေးချယ် မတတ်မှု၊ ကပျက်ကချော် အရေးအသား၊ စာလုံးပေါင်းအမှား စသဖြင့် သဒ္ဒါစည်းကမ်းနဲ့ အပြင်က အရာတွေကို အသားပေး ရေးထားပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူအများဖတ်ဖို့ စာရေးပြီဆိုရင်တော့ သဒ္ဒါစည်းကမ်းများ သတိပြု လိုက်နာရပါမယ်။ (အခုလို ရေးနေတာတောင် စိုးရိမ်တယ်၊ စကားပြောနွယ် ရေးနည်းက တမျိုးလေ) အကယ်၍ အဲဒီအမှားမျိုး လုပ်မိခဲ့ရင် ကိုယ့်စာတည်းဖြတ်သူ အယ်ဒီတာ၊ အလုပ်လျောက်လွှာဖတ်သူ အရာရှိ၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အရင်စလို ကောက်ချက်ချ မကောင်းမြင် ခံရဖို့များတယ်။ အဲဒီမျိုးတွေမှာ ခေါင်းမာမနေဘဲ ယာယီပြင်ဆင် ရေးသားပါ။ လူဂျီးတွေပြောတာ ဘာတဲ့….. “စည်းကမ်းလိုက်နာ ဘေးကင်းကွာ”
ဒီဟာက ရိုးရိုးလေးပါ။ တကယ်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေတခု ဖော်ပြချင်ရင် (များသောအားဖြင့် စာလုံး if or တြိယာ wish) အနောက်မှာ verb to beအတွက် were သုံးပါတယ်။ ငါသာသူဌေးဆိုရင် * If I was werearich man. ငါဖြစ်ချင်သလို Oscar Mayer wiener သာငါဆိုရင် * I wish I was were an Oscar Mayer wiener. ဟီလာရီကလင်တန်သာ သမတဆိုရင် အခြေအနေတွေ လုံးဝလောက်ကို ခြားနားနေလိမ့်မယ်။ * If Hillary Clinton was were president, things would beawhole lot different. အခြားဟာအတွက် If ကို (စိတ်ကူးမှန်းဆချက်၊ မေးခွန်း) သုံးတာဆိုရင် subjunctive မလုပ်ပါနဲ့။ သတင်းထောက်က သူ့ကို ပျော်နေခဲ့ သလားမေးတယ်။ * The reporter asked him if he were was happy. အကယ်လို့ လူစိမ်းတဦး ဒီမှာ မနေ့ညက ရှိနေခဲ့ရင် လက်ဗွေရာ သူကျန်ခဲ့ရမှာပေါ့၊ ကဲ.. အပြင်ဖက်မြေ ငါတို့ သွားကြည့်ရအောင် * If an intruder were was here last night, he would have left footprints, so let’s look at the ground outside.
များအားဖြင့် မှားတတ်တာ အစဉ်လိုက် ပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပါ၊ ဥပမာ: သူငယ်ချင်းက တို့စရာအနှစ်တွေ လုပ်ခဲ့တယ်၊ အားလူးကြော် ယူလာခဲ့တယ်။ My friend made salsa, guacamole, and brought chips. အကယ်၍ ပထမနှစ်ခုအတွက် တြိယာ made သုံးခဲ့ရင် နောက်ဟာလည်း အကြုံးဝင်တယ်။ စာချောအောင် များသောအားဖြင့် ဒီလိုလေး ပြန်ပြင်လိုက်ပါ။ သူငယ်ချင်းက တို့စရာအနှစ်တွေ လုပ်ထားပြီး တွဲဖက်စားဖို့ အာလူးကြော်ပါ ယူလာတယ်။ My friend made salsa and guacamole and brought chips to go with them.
အမြဲလိုလို မှားကြတာမို့ သတိပြုထားဖို့က… ပင်ပန်းတယ်ကွာ၊ လှဲအိပ်လိုက်အုံးမယ်။ * I’m tired, so I need to go lay lie down. ကောင်တာပေါ်မှာ ငါးရှိတယ်၊ အသားလွှာ သန့်ပြီးသား ကင်ဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ * The fish laid lay on the counter, fileted and ready to broil. ဒီသုံးခုကတော့ လူအများ past နဲ့ participle လွဲချော် သုံးတတ်ကြတဲ့ ဟာတွေပါ။ * Honey, I shrunk shrank the kids. * Inafit of pique, he sunk sank the toy boat. * He seen saw it coming.
စာလုံးလေးသုံးလုံး ကြည့်ပါအုံးစို့ရဲ့။ နင့်ကိုငါချစ်တယ် I love you မထင်လိုက်နဲ့နော်။ ငါ့ကို၊ ငါကိုယ်တိုင်၊ ငါ တို့ကိုပြောမှာ.. ဂရမ်မာအရ သူတို့ကို object, reflexive, subject လို့ခေါ်တယ်။ သူတို့အတိုင်း ရှိနေသ၍ အပြုခံ object နဲ့ ပြုလုပ်သူ subject တို့သည် ဘာပြသနာမှ မရှိဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာကို ကိုယ့်စကားအဖြစ်သုံးတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ဘယ်သူမှ I အစား Me မှားမသုံးဘူး။ Me walked to the bus stop or He gave the book to I. သို့ပေသိ တခုခုအတွက် နာမ်စားနဲ့ နာမ်တွဲသုံးတဲ့အခါ ကွိကနဲ ဂွိတတ်တယ်။ ဥပမာ – Fred and I… အစား Me and Fred had lunch together yesterday, လို့ပြောတာ ကျုပ်တို့ကြားနေရတာပဲ။ မိမိကိုယ် ရည်ညွှန်းရင်း ဘာရယ်မသိ နှုတ်ကလှစ်ကနဲ ထွက်သွားတာ။ ပုံနှိပ်စာမျိုး စာချောရေးတဲ့အခါ မသုံးရလို့တော့ ကျနော်တို့ သိထားကြတယ်နော်။ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ ယောင်မှားမသုံး မိစေနဲ့ပေါ့ဗျာ။
အလားတူပဲ အပြုခံရသူ object နေရာ ပြုသူ subject သုံးမိတာလည်း ရှိသဗျ။ အယ်ဂိုးနဲ့ငါ I မဲပေးကြပါလို့ Me အစား မှားသုံးတာ ၁၉၉၂ခုနှစ်မှာ သမတ ကလင်တန်တောင် လုပ်ခဲ့သးတယ်။ when he asked voters to give Al Gore and I [instead of me]achance to bring America back. ဘာသာဗေဒနဲ့ သဒ္ဒါဆရာ အချို့ကတော့ အဲဒီအသုံးနှုန်းကို အပြင်းအထန် ကာကွယ်နေတုံးပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယေဘူယျအားဖြင့် မှားတယ်၊ ရှောင်သင့်တယ်လို့ လက်ခံထားပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတဲ့စာလုံးက ကိုယ်တိုင် myself ဖြစ်ပါတယ်။ I နဲ့ me အကြား အလယ်အလတ် စာလုံးဖြစ်လို့ ထင်ရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ Myself and my friends went to the mall or They gave special awards to Bill and myself ကြတော့ သိပ်မနိပ်ဘူး။ အဲဒီအစား My friends and I… နဲ့ Bill and me. လို့ ပြောင်းရပါမယ်။
5. The ‘dangling’ conversation
အတန်းထဲက ကျောင်းသားတွေကို လက်လီ ကုန်ပစ္စည်းတခု လေ့လာခိုင်းဖူးတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယား စီးကရက် အမှတ်တံဆိပ် ရွေးတဲ့ကျောင်းသူရေးတာ… အတန်းထဲ ထိုင်နေရင်း၊ ဘားမှာ ကနေရင်း ဘရာက ဘာပြသနာမှ မလုပ်ဘူး၊ သိပ်ကောင်းတယ်၊ ဈေးနည်းနည်းမြောက်ပေမဲ့ ရင်နှစ်မွှာက သင့်ကို ကျေးဇူးတင် နေမယ်။ Sitting inaclass or dancing at the bar, the bra performed well…. Though slightly pricey, your breasts will thank you. စာနှစ်ကြောင်းလုံး ကို့ယို့ကားယား အထူးပြုပုံစံနဲ့ မှားနေတယ်၊ (ရိုင်းသွားရင် ခွေးလွှတ်) အတန်းထဲမှာ ဘရာ ထိုင်မနေ၊ ဘားထဲ ကမနေဘူး။ ပြီးတော့ ရင်သားတွေ ဈေးလေးနဲနဲ ကြီးတာ မဟုတ်ဘူး။ ပုံပျက်ပန်းပျက် အရေးသားတွေက ဘာရယ်မှန်းမသိ ဆွဲဆောင်အား ကောင်းတယ်။ စနစ်တကျ ရေးသူတောင် သည်လိုအမှား အတော်လုပ်တယ် …. စာချေ မတည်းဖြတ်ခင် အထိပေါ့။ အဲလိုမဖြစ်ဖို့ အကြံပေးရမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး Modifier- Comma-Subject- Verb စာကြောင်းတည်ဆောက်ပုံ ကြိုတွေးပါ။ နောက်… Modifier- Comma -Subject- Comma- Verb သို့ပြောင်းပါ။ စာချောသွားရင် အိုကေ..။ နို့မို့ရင် စာထဲ ကို့ယို့ကားယား တခုခု ရှိနေပြီ။ အပေါ်က စာကြောင်း ပြင်ရေးတဲ့အခါ ဘရာက အတန်းထဲထိုင်ရင်း၊ ဘားထဲမှာကရင်း ပြသနာ မဖြစ်ဘူး၊ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ The bra, sitting inaclass or dancing atabar, performed well. လို့မှား ရေးကောင်းရေးမိမယ်။ အမှန်က စာလုံးအနည်းငယ် ထပ်ဖြည့်ရပါမယ်။ မင်းအတန်းထဲထိုင်ထိုင် ဘားမှာကက ဘရာက ပြသနာ မရှိဘူး၊ သိပ်ကောင်းတယ်။ Whether you’re sitting inaclass or dancing at the bar, the bra performs well.
Semicolon လို punctuation မျိုးကို ပုံစံနှစ်မျိုးမှာပဲ တကယ်မှန်မှန် သုံးခွင့်ရှိတယ်။ တခုက ပြည့်စုံတဲ့ clause နှစ်ခုကို ခွဲခြားတဲ့အခါ (ကလော့စ်မှာ ပြုလုပ်သူ subject နဲ့ တြိယာ verb ပဲပါတယ်၊ ပြုခံရသူ object မလို..) ကျနော် တံခါးခေါက်တော့၊ ဘယ်သူမှ မထူး။ ဒုတိယတခုက သူ့ဟာသူ ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ အမယ်တွေကို ခွဲခြားစာရင်း ပြုတဲ့အခါ … မေမြို့၊ မန္တလေးတိုင်း.. ကသာ စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့မှာ တီးဝိုင်းတီးခဲ့သည်။ Colon သုံးရမည့် နေရာမှာ semicolon မသုံးရ။ ဥပမာ – ယိုကိုဒါကိုက ညအိမ်မက်ဆိုး မက်စေတဲ့ တခုတည်းသော အဖြတ်အတောက် punctuation သည် semicolon..။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ပြောထားသလို စာလုံးများ အဓိပ္ပါယ်သည် အချိန်ကာလ ကြာမြင့်တဲ့အခါ မလွဲမသွေ ပြောင်းပါတယ်။ အများသူငှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မသိခင် သုံးရင် ဂွကျတတ်တယ်။ တခါတရံလည်း စာလုံး အသွားအလာကြည့်ပြီး အလွယ်နားလည်နိုင်တယ်။ ဖတ်သူ ဇဝေဇဝါစေတဲ့ အနည်းနဲ့အများ မူလအဓိပါယ်မှ ဆန့်ကျင် အနက်ထွက်တဲ့ စကားလုံးတွေ အသုံးများ လာနေပြီ။။ စာထဲ ပုံနှိပ်ဖို့တော့ အချိန်မကျသေးဟန် မတူဘူး (unfazed အစား unphased သုံးတာမျိုးပါ)။ အခြားတဖက်မှာလည်း အံ့အားသင့်သည် astonish ကို ကျောက်ခဲဖြစ်သွားသည် (ရွာသားဦးကျောက်ခဲ မဟုတ်ပါ) turn to stone လို့ ဒီခေတ် ဘယ်သူမှ မထင်ကြ တော့ဘူး၊ အဲလိုမူရင်း အဓိပါယ် မထွက်ရကောင်းလား သွားပြောရင် ဝိုင်းဟားကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုမကျ ဒီမကျ အလယ်ရောက်နေတဲ့ စာလုံးနဲ့ စကားစုတွေ အများအပြားရှိတယ်။
ဒါကတော့ လူရှေ့သူရှေ့ ပြောရင် သိပ်မနိပ်တော့တဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းအချို့ စာရင်းပြုထားတာပါ….
တခုခုလို့ သိသာအောင် ဖော်ပြရတာ ကျနော် အားနာတတ်တယ် (မြန်မာစကား အားနယ်တယ် ကို hesitate အဖြစ် ဖလှယ်သုံးလို့ ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်)၊ ဒါပေမဲ့ ရံဖန်ရံခါ ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင် လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ its, your or whose ကဲ့သို့ ပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့ နေရာမှာ it’s, you’re or who’s လို အတိုချုပ်ထားတာ မသုံးမိပါစေနဲ့။ ဟိုဖက်ဒီဖက် အပြန်အလှန်ပေါ့နော်။
မှတ်ချက်။ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာမဟုတ်၍ ဘာသာပြန် အမှားအယွင်းများ ရှိနိုင်ပါဂျောင်းနဲ့ တော်ယုံအမှားဆိုလျင် ခွေးလွှတ်ပါရန်၊ အတိအကျ သိလိုပါက ကော်ပီကက် မူရင်းစာအား ဖတ်ရှုပါရန် လေးစားစွာ ကျားပံအပ်သည်။
ကွန်ကရစ်ကြမ်းပေါက် ကျမ်းပြုဆရာ ဒေါက်တာကြောင်ကြီး (Phd; ပုဒ်ထီး ပုဒ်မ 376 – 377)
By Ben Yagoda | The Week – Thu, Mar 14, 2013
I recently wrote an article for TheWeek.com about bogus grammar “rules” that aren’t worth your time. However, there are still plenty of legitimate rules that you should be aware of. Not following them doesn’t make youabad person or even (necessarily)abad writer. I’m sure that all of them were broken at one point or another by Henry James, Henry Adams, or some other major author named Henry. Moreover, grammar is one of the least pressing problems when it comes to the poor state of writing today. In my new book, How to Not Write Bad: The Most Common Writing Problems and the Best Ways to Avoid Them, things like wordiness, poor word choice, awkwardness, and bad spelling — which have nothing to do with grammar — take up the bulk of my attention.
Nevertheless, anyone who wants to write inapublic setting has to be aware of grammar. (And I’m concerned with writing here; talking isawhole different ballgame.) If you make these errors, you’re likely to be judged harshly by an editor you want to publish your work; an executive who, you hope, will be impressed enough by your cover letter to hire you; orareader you want to persuaded by your argument. In each case, there’sapretty easy workaround, so better safe than sorry.
This one is pretty simple. When you’re writing aboutanon-true situation — usually following the word if or the verb wish — the verb to be is rendered as were.So:
Inaclass, I once assigned students to “review”aconsumer product. One student choseabra sold by Victoria’s Secret. She wrote:
Danglers are inexplicably attractive, and even good writers commit this erroralot … in their first drafts. Here’sastrategy for smoking these bad boys out in revision. First, recognize sentences that have this structure: MODIFIER-COMMA-SUBJECT-VERB. Then change the order to: SUBJECT-COMMA-MODIFIER-COMMA-VERB. If the result makes sense, you’re good to go. If not, you haveadangler. So in the first sentence above, the rejiggered sentence would be:
I sometimes say that when you feel like usingasemicolon, lay lie down till the urge goes away. But if you just can’t resist, remember that there are really only two proper uses for this piece of punctuation. One is to separate two complete clauses (a construction withasubject and verb that could stand on its own asasentence). I knocked on the door; no one answered. The second is to separate list items that themselves contain punctuation. Thus, The band played Boise, Idaho; Schenectady, New York; and Columbus, Ohio.
As I noted in my previous article, the meaning of words inevitably and perennially change. And you can get in trouble when you useameaning that has not yet been widely accepted. Sometimes it’s fairly easy to figure out whereaword stands in this process. It’s become more common to use nonplussed to mean not bothered, or unfazed, but that is more or less the opposite of the traditional meaning, and it’s still too early to use it that way when you’re writing for publication. (As is spelling unfazed as unphased.) On the other hand, no one thinks anymore that astonish means “turn to stone,” and it would be ridiculous to object to anyone who does so. But there arealot of words and expressions in the middle. Here’s one man’s list ofafew meanings that aren’t quite ready for prime time:
I hesitate to state what should be obvious, but sometimes the obvious must be stated. So here goes: Do not use it’s, you’re or who’s when you mean its, your or whose. Or vice versa!
သူများတွေကို lecture တစ်ချိန်စာလောက်တော့ ဆရာလုပ်လို့ရပြီ …
If I wereaboy … even just foraday … I’d roll out of bed in the morning …. And throw on what I wanted …. And go drink beer with the guys …
谢谢 ဦးကြောင် .. ကူးသွားတယ်ဗျ
အနော် မကြာခဏသုံးမိ တဲ့ အမှားတွေတွေ့တယ်ဗျ။
အင်္ဂလိပ်စာသင်တာ.. မအ,အောင်…။ :528:
ထူးဆန်းလိုက်တာ ကိုကြောင်ကြီးက အင်္ဂလိပ်စာ သဒ္ဒါဆောင်းပါးတွေ ရေးလို့ပါလား။ ကြုံတုန်း ဝင်ပြောလိုက်မှပဲ။ သဒ္ဒါကို သဒ္ဒါလို သင်နေရင် တတ်ဖို့ သိပ်ခက်တယ်လို့ ဆရာတယောက် ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ သဒ္ဒါလို မသင်တဲ့နည်းနဲ့ သင်ရတယ်တဲ့။ Cambridge University ကထုတ်တဲ့ English grammar in use စာအုပ်က တော်တော်ကောင်းတယ် ကြားဖူးတာပဲ။
ပြောချင်လို့ ကြားဖူးတာလေး ဝင်ပြောတာပါ။
ဒန် တန် တန် တန်
ခရီးလေးတခု ထွက်နေတာရယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလေးတွေ ရှိနေတာရယ် အလုပ်မအားတာတွေကြောင့် မလာဖြစ် မရေးဖြစ်တာပဲ။ ကိုပေနဲ့ ပြန်တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။
.. မြန်မာ့နည်း..မြန်မာ့ဟန်နဲ့ နှုတ်ဆက်ရင်း.. ဖားထားတာ.. ဟင်း..ဟင်း..။ :harr:
မင်္ဂလာပါ သဂျီးမင်းခင်ဗျာ နေကောင်းပါတယ် ထမင်းတော့ အခုမစားရသေးဘူး တော်ကြာမှစားမလို့ ခရီးလေးတခု သွားနေလို့ ထွေထွေထူးထူးတော့ မဝယ်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒေသထွက်ကုန်လည်း နည်းနည်းပါးပါးပါပဲ။
ဒီထဲမှာ အပေါ်ဆုံးက အကြောင်းအရာ ကတော့ဖြင့် …
ခပ်တည်တည်နဲ့ မှားသုံးနေကျ စကားလုံးကြီးကို ဖြစ်လို့ … ဟီး …
ခုဒေါ့ သိတွားဘီ .. အေးချေးဘဲ …
ဒီတခါတော့ ဒယ်ဒီကြောင် အံစာတုံးစာ မိသွားပြီ။
မိုက်စ်တယ်ဗျာ။ ဖတ်လို့လဲကောင်း မှတ်လို့လဲလွယ်။
ဝင်ဆွေးနွေးဖို့မလိုလောက်အောင် ပြည့်စုံတယ် မှတ်တာဘဲ။
မှားခဲ့ မှားဆဲ တွေဖြစ်တာရယ်..
အသက်ကြီးတော့ တစ်ခေါက်ဖတ်ယုံနဲ့ မမှတ်မိတာရယ်ကြောင့်
ကူးထားလိုက်ပါတယ် ဆြာကြောင်ရေ… :hee:
ဒီလိုလေးတွေ များများရေးပေးစေချင်ပါတယ်။ မနောက အင်္ဂလိပ်စာမှာ ခွေးအကြီး လှည်းနင်းနေသလို ဖြစ်နေမိလို့ပါ။ အများကြီး လေ့လာရပါဦးမယ်။ ခုစာတွေလည်း ကူးသွားပါတယ်။ အင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေလည်း များများရေးပေးပါဦး။
တချိန်တုန်းက အူးကြောင် သမီးလေးတွေကို ဘိုတထောင်နားမှာ ပြခဲ့တာဆို… (အင်္ဂလိပ်စာ)
ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်.. ကိုရင်က အင်္ဂလိပ်စာဆို
E စာဆိုရင် Dirty တစ်လုံးပဲပေါင်းတတ်တယ်ဗျ…
ကြုံရင်ကြုံသလို သင်ပေးဘလား ဒက်တီရေ
ဖတ်သွား၊ မှတ်သွား၊ ကျေးဇူးစကား ပြောသွားကြောင်းပါ ဖျာ့။
ဟိုဘက်မှာ သူကြီးက ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ မပြောသင့်ဆိုလို့
သူစိတ်ချမ်းသာအောင် ကျွန်တော်မျိုးမ လို့ ပြောတာ။
ဗျတို့၊ ရှင့်တို့ ဆိုရင်လဲ အင်မတန် အောက်ကျို့ပြောတာဖြစ်မစိုးလို့ ဖျာ့ လို့ ပြောတာ။
ဒါထက် Hesitate ကို တွေဝေတယ်လို့ သုံးတတ်သလားလို့။
ကျမရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာဆရာမကို အားနာတယ်ဆိုတာ ဘယ်လို သုံးရမလဲမေးကြည့်တော့ Feel backward လို့သုံးပါတဲ့။
အားမနာပါနဲ့ဆို Don’t feel backward လို့ သင်ပေးတယ်။